End of the season And Completing daily quest - Neoxian City
End of the season And Completing daily quest
Today is the end of the season. So, today I played daily quest and I also tried to advance the bronze II.
I tried to finish the daily quest first. Today's daily quest is fire splinter quest. I played thirteen times to finish the quest. After completing the quest, I opened the reward. The reward is one legendary potion.
Then, I played with water splinter to reach bronze II. After playing some battles, my rating reached bronze II. For card power, I tried to rentacard that had 1000 power. I rented dark hoan card from peakmonsters site. This card had 1000 card power, and it only cost over 500 credits to rent foraday.
Then, I reached bronze II. After the end of the season, I opened the seven rewards. Unfortunately, I can not see the rewards because of poor internet connection. When I went to see the rewards in peakmonsters site, there is no update for today. I think I can see the rewards tomorrow. Based on the increased card power, I think I get two cards.
ဒီနေ့ကတော့ ရာသီပြီးဆုံးမဲ့နေ့ပါ။ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ daily quest ကိုလည်း ပြီးအောင်လုပ်သလို bronze II ရောက်အောင်လည်း ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး daily quest ကို ပြီးအောင် ကြိုးစား ပါတယ် ။ဒီနေ့ daily quest ကတော့ fire splinter quest ပါ။quest ပြီးဖို့ ဆယ့်သုံးကြိမ် ကစား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။quest ပြီးစီး သွားချိန်မှာတော့ ဆုကို ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆုကတော့ legendary potion တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့နောက်မှာတော့ bronze II ရောက်ဖို့ water splinter နဲ့ ကစား ပါတယ် ။တိုက်ပွဲ အချို့ ကစားပြီး နောက်မှာတော့ rating က bronze II ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။card power အတွက်တော့ card power 1000 ရှိတဲ့ ကဒ်တစ်ခု ကို ဌားဖို့ ကြိုးစား ဖြစ်ပါတယ်။Peakmonsters site ကနေ ပြီး dark hoan ကဒ်ကို ဌားခဲ့ပါတယ်။ဒီကဒ်က ကဒ် power 1000 ရှိပြီး ဌားခက တစ်ရက်စာ 500 credits ကျော်ခန့် ကုန်ပါတယ်။
ဒီ့နောက်မှာတော့ bronze II ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ရာသီ အဆုံးမှာတော့ ဆု ခုနှစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းတာကြောင့် ကြည့် မရခဲ့ပါဘူး။Peakmonsters site မှာ သွားကြည့်တော့ လည်း ဒီနေ့အတွက် update လုပ်ထားတာ မတွေ့ပါဘူး။နောက်နေ့မှပဲ ကြည့်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။card power တိုးလာပုံ အရတော့ တန်ဖိုးနည်း ကဒ်နှစ်ခုတော့ ရတဲ့ပုံပါပဲ။
hive-131619 spt proofofbrain neoxian palnet trafficinsider ocd archon oneup
ကောင်းတယ် ညီမလေး။ ကဒ်ရတာတော့ ကောင်းပါတယ်။
Daily quest တွေ ပြီးအောင် တစ်ရက် အချိန် ပျှမ်းမျှဘယါလောက်ပေးရလဲ။
နိုင်ရင် DEC ရတာလား။ ရှုံးရင်တော့ မကုန်သွားလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ SPS ကျတော့ ဘယ်မှာသုံးတာလဲ။ !PIZZA
တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို နာရီဝက် တစ်နာရီလောက် တော့ daily quest ပြီးအောင် ကစားရတယ်။ နိုင်ရင် potion (သို့) credits (သို့) ကဒ် ရတတ်တယ်။ကဒ် ကတော့ ရတာ ရှားတယ်။ရှူံးရင်တော့ မကုန်ပါဘူး။bronze II လောက် အဆင့်ရောက်ရင် နိုင်ရင် dec ရတယ်။bronze III နဲ့ novice အဆင့်တွေက တော့ dec မရပါ။daily quest က ရတာလောက်ပဲ မျှော်ရတယ်။sps က stake ထားရင် stake တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး ဟို တစ်လောက vouncher ခွဲဝေပေးတယ်။stake မလုပ်ချင် ပြန် ရောင်းစားလည်း ရတယ်။
myothuzar tipped princekham (x1)
@myothuzar(3/9) tipped @mamamyanmar (x1)
ပါဝါတစ်ထောင်ကျော်က ဌားထားတာ။ရတဲ့ ကဒ်နှစ်ခုက ၁၀ လောက်ပဲ တိုးတယ်။
ဒါပဲ ဒါပဲ ပြောရမယ့်စကားတွေ ဆွံအသွားပြီဟာ
Brower နဲ့သုံးရင် အဲဒီ့နေရာကနေ ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်.....
ပုံမှန်တင်နေကျ daily quest post ကို ဒီအတိုင်းတင်ပြီး
ရာသီသိမ်းရတဲ့ဟာလေးကို အချိန်ခြားပြီးတင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ညီမ
ရာသီသိမ်းက တစ်လမှ နှစ်ခါပဲတင်လို့ရတာ
daily quest post ကို ညဘက်တင်ရင် ရာသီသိမ်း post ကိုမနက်ပိုင်းတင်ပေါ့
မနက်ပိုင်းမအားရင် ညထဲက ရေးပြီး note ထဲမှာ မှတ်ထား မနက်ကျ post တင်လိုက်
ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ရစေချင်လို့ အကြံပေးတာပါ
ဟုတ်။ကျေးဇူးပါ။ညီမက ပျင်းလို့ တစ်ပုဒ် ထဲပဲတင်တာ😁😁😁။အကိုပြောတဲ့နေရာ ကြည့်တာ ညီမဖုန်းးနဲ့သုံးတာတော့ မတွေ့ဘူးအကို။
အဲဒါ ဖုန်း brower နဲ့ရိုက်ပြထားတာ ညီမ
တွေ့ပြီ အကို။splinterlands.com မှာ သွားကြည့်တော့ တွေ့ပြီ။ခုန splinterlands.io မှာပဲ ကြည့်တော့ မတွေ့ဘူး ဖြစ်နေတာ။ကျေးဇူးပဲ အကို။
post တိုင်း game မှန်းသိရဲ့နက် အစအဆုံးဖတ်တယ်
နားကို မလည်တာက ငါညံ့တာပါအေ !LOLZ
@myothuzar, I sent you an $LOLZ on behalf of @mamamyanmar
အင်း...မကစားတဲ့သူကတော့ သိပ်နားမလည် လောက်ဖူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပြီး vote ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။